घर » रणनीति » खुबै Bros बदलयो लेने
खेल जानकारी: खुबै Bros बदलयो लेने
विवरण: सुपर मारियो र तिनका साथीहरूले ध्वनि, गधा काँग यो अचम्मको र रोमाञ्चक खेलमा आफ्नो खराब शत्रुहरू सामना गर्न मद्दत गर्नुहोस्। तिनीहरूले चाल गर्नेछ? मात्र तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्छ कि।
खेल्नु: 143,930 ट्याग: रक्षा खेल, रक्षा खेल, मारियो, ध्वनि
विगतमा लुकाइएका templeunlock को दन्त्यकथा
आफ्नो साहसिक मा Sadie, नूह र Dudley सामेल तिनीहरूले जंगल अन्वेषण र Olmec मन्दिरको लुकेका रहस्य अनलक रूपमा! लुकाइएका मन्दिर अनलक विगत, एक स्वतन्त्र अनलाइन पहेली खेल को परभक्षी, तपाईं जंगल हालियो छन् र conq पर्छ
दन्त्यकथा cho'gath को लिग संसारको खान्छ
यो ठूलो राक्षस तपाईं आवश्यक! सबै खाना लिन र सबै भवनहरु नष्ट र तपाईं साँच्चै भोको छन् कारण, मान्छे मार्ने प्रयास गर्नुहोस्! खेल विनाश गर्न सबै सुझावहरू प्रयोग र सबै केहि गर्न! हामीलाई थाहा छ तपाईं यसलाई व्यवस्थापन गर्नेछ।
राक्षस दस्ते उन्नत
राक्षस दस्ते थप चुनौतीपूर्ण RPGs संग फिर्ता छ! आइटम, spells, उपकरण, कमाण्ड, सेवकहरू र विशेष आक्रमण भन्दा 60 शत्रु सेट,6अद्वितीय वर्ण र 300 भन्दा बढी सुविधाहरू!
नियन्त्रण शिल्प3- पछिल्लो युद्धमा
ControlCraft3एक छिटो paced कार्य-रणनीति खेल हो। आफ्नो सेना शत्रु नियन्त्रण अंक आक्रमण गर्न आदेश। सेना र सामरिक क्षमता एक विस्तृत श्रृंखला उपयोग। युद्धमा को गर्मी महिनामा, आक्रमण कहिले, कहाँ र कसरी को सामरिक निर्णय WI हुनेछ
बनाम लाश सौन्दर्य केटी बिरुवाहरु
लाश मान्छे अपहरण! तपाईं human.Be होसियार उद्धार गर्न तिनीहरूलाई मार्न पर्छ? तपाईं मान्छे undesignedly मार्न भने, तपाईं मृत हुनेछ!
बनाम लाश अनलाइन बिरुवाहरु
Bomberman समान एक खेल, तर लाश वर्ण बनाम बिरुवाहरु संग। तपाईं छिटो सार्न छ, शत्रुलाई र बिरुवाहरु को छुटकारा गर्न बम राखे। खेल्न तपाईँको माउस प्रयोग गर्नुहोस्।
स्पाइडर - नायक रक्षा
स्पाइडर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्गो रक्षा गर्न मिशन लागि स्थापना गरिएको छ। उहाँले4सुपर खलनायक द्वारा ambushed भयो त अब तिमी उसलाई खलनायक पराजित र सबै आफ्नो सुपर नायक कौशल प्रयोग गरेर कार्गो सुरक्षा गर्न मद्दत छ।
खुबै Bros बदलयो लेने
Ninjas बनाम डाकू टीडी 3
बनाम डाकू टीडी3खेल विवरण Ninjas आफ्नो लूट लिन आउँदै समुद्री को छालहरू बाहिर ले आफ्नो Ninjas ठाँउ।
रक र युद्ध
आफ्नो ऊर्जा भेला कोसा रक्षा गर्न एकाइहरु ठाँउ। आक्रमणकारीले विरुद्ध कोसा रक्षा।
को Asgard थोर सुरक्षा
थोर Loki द्वारा आक्रमण मा tricked आक्रमणकारिहरुमा को एक संग्रह देखि Asgard गरेको ढोकाहरू रक्षा गर्नुपर्छ
वर्षा मृत्यु र विनाश तपाईं विनाशकारी spells डाली र eldritch राक्षस बोलाउन प्रकृतिका धेरै तत्वहरू आदेश रूपमा। एक तुच्छ अपरेंटिस रूपमा सुरु, उच्च लडाई जादू सिक्न र तपाईं आफ्नो W बनानु रूपमा आफ्नो टावर शीर्ष उन्मत्त Duels लड्न